Wiishka dayactirka gaariga wiishka waa la qaadi karaa, naqshad cusub, oo fududahay in la isticmaalo, inta badan loo isticmaalo dayactirka gaariga, iyadoo la adeegsanayo aaladdan ayaa si fudud kor ugu qaadi karta dhererka gaariga, shaqaalaha dayactirka ee ku habboon hagaajinta gaariga.
Sheyga waa dhererkiisu yahay 115cm wuuna kici karaa wuuna ku dhici karaa inta udhaxeysa 25-38cm. Waxay ka samaysan tahay bir, miisaankiisuna waa ilaa 19-25kg.
Samee adeegga gawaarida bedelka gawaarida gawaarida gawaarida si fudud oo raaxo leh ugu shaqee salka gaariga
Rullaluistemka cawsku waa ku habboon yahay tirtirka dhaawaca iyo caawinta abuuritaanka koritaan cusub oo loogu talagalay cawska caafimaadka leh. Xulashada koowaad ee gaariga xilliga firaaqada ah, ku habboon, wax ku ool ah oo hufan. Ilaalinta deegaanka Kahor abuurka abuurka cawska, rooga cawska ayaa gacan ka geysan kara heerka dhulka aan sinnayn. Abuurka ka dib, rogiddu waxay caawisaa xawaareynta biqilka iyada oo la hubinayo in abuurka ay xiriir la yeeshaan carrada. Isticmaal rooga cawska oo biyo ka buuxaan si uu uga caawiyo sood cusub inuu dhismo, ka saarida jeebabka hawada iyo hubinta xididada inay la xiriiraan carrada. Haddii jiirka iyo cayayaanka ay waxyeelleeyeen cawskaaga, rooga cawska ayaa ka caawiya sidii cawska loogu simi lahaa isku mid ahaansho.
Xulashada koowaad ee gaariga xilliga firaaqada ah, ku habboon, wax ku ool ah oo hufan. Ilaalinta deegaanka Wax soo saarkan waxaa loo isticmaali karaa munaasabado badan oo firaaqo ah, sida aada baarkinka dalxiis, u bixida banaanka waxaa loo isticmaali karaa in lagu qaado qaar ka mid ah cuntada, biyaha, sahayda iyo wixii la mid ah. Tag goobta rinjiyeynta, xilliga firaaqada, iwm. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu rakibo waxyaabaha loo baahan yahay, si sahlan loo isticmaali karo.
Samee gawaarida gawaarida adeega bedelka gawaarida gawaarida si fudud oo raaxo leh ugu shaqeeya sagxada gaariga .Samee polyester daryeel waara, fudud, bir adag oo adag - Wheels system-lifaaqa dhakhso leh ,, Iskuwaafajinta ku xirnaanta Mesh waxay hubisaa Wareegtada Hawada Wanaagsan, Iyadoo hore iyo hore albaabka dambe, dabaysha wareegaya iyo ilaaliyaha roobka ee albaabka hore, Shabakadda Sare ee Mesh oo leh dabool la daboolan karo; oo leh shaashado milicsi iyo iftiimiyayaal
Tayo wanaagsan, wax ku ool ah oo fudud, awood qaadid ballaaran, nolol adeeg dheer, isku xirnaan habboon.
PU wheels waa xulasho caan ah codsiyada warshadaha sababta oo ah aamusnaanta ay ku shaqeynayaan marka la barbar dhigo giraangiraha adag sida birta ama birta birta ah. Giraangiraha PU-ga ayaa ah kuwo nuugaya shooga waxayna ka caawinayaan barkinta raacitaanka. Waxay sidoo kale ka nuugtaa kuuskuusyada dhul aan sinnayn. Isticmaalidda gawaarida PU halkii birta ahayd waxay si weyn u yareyn kartaa heerarka buuqa si ay kaaga caawiso ilaalinta maqalka shaqaalahaaga.
Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Gawaarida Caster, PU Wheel, Shiinaha Mashiinka la taaban karo, Shiinaha PU Wheel, Shiinaha PU xumbo Wheel,